ठेक्काको काम (लघुकथा)
त्यतिबेला उ जवान थियो, हट्टा कट्टा जिउडाल र गठीलो शरिर , त्यो भन्दा पनि उसको आस्थाका कारण उ सबैतिर परीचित थियो ।
राजाको जन्मदिन, भ्रमण र अन्य समारोहहरुमा उ आफ्ना साँच्चै विशाल जत्थाहरु सहित सवारि-स्थलहरुमा पुगेको हुन्थ्यो । अनी सवारी-क्रममा गगन भेदी नारा लगाँउथ्यो :-"हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ!", "हाम्रो भाषा हाम्रो भेष प्राण भन्दा प्यारो छ!" उसको पछाडी लागेका विसाल भीड र उस्को जोस देखेर सबै भन्थे " यो चानचुने मान्छे होईन 'भित्र' सम्म पहुँछ छ यसको!"
सम्मसमयले विस्तारै कोल्टे फेर्दै जाँदा बिचमा उसले "प्राण भन्दा प्यारो" को सट्टा "प्रजातन्त्र जिन्दावाद!" को नारा लगाउन थालेको थियो। नारा फरक भए पनि उस्को पछाडी 'जिन्दावाद!' को ताल दिंदै हिडनेको संख्यामा केहि कमी आएको थीएन। उ आन्दोलनमा पुरै होमीएको थियो र त्यती बेला सबैजना उसलाई 'यो प्रजातान्त्रिक विचारधाराको मानिस हो! फलानो दलको 'माथि' सम्म वोलवाला छ' भन्ने गर्थे ।
समयले अझै कोल्टे फेर्‍यो, आजकल ऊ "सामन्ति शासन चाहिदैन","गणतन्त्र जिन्दावाद!"भन्ने नाराका साथ पहिलेको भन्दा ठुलो भिडका साथ सडकमा देखिन्छ। आजकल पर्यव्यक्षक र पत्रकारहरु उसलाई "खाँटी गणतन्त्रवादी" भन्छन् अनि बजारमा 'हाई कमाण्ड' सम्म उसको पकड दर्‍हो रहेको हल्ला छ।
aAkaR 20/2/08 5:09 PM
reallyatouchy one........ वास्तब मा देश यस्तै हर्कतहरुले गर्दा टुक्रिने स्थितिमा पुगेको छ । उसको पेशा नै त्यस्तो रहेछ त हामीले के गर्न सक्छौँ र ???
Rajiv Sharma 23/2/08 2:04 PM
Nepal ma rajniti yesari nai hunchha, na karaune lai matlab na bolne lai thaha... sabai jana khali paisa ko lagi hidne ta aho!